Kubatsira - Hebei Marshine Machinery Kugadzira Co., Ltd.
Tinogamuchirwa kuti ubatane nesu, nekuti isu tiri akatsiga, kwenguva refu, tiri kukura pamwe chete vatinoshanda navo. Tinogona kukuunzira iwe kukosha uye kukosha-kuwedzerwa masevhisi, lets kukura uye kukura pamwe chete!
Hedu makuru zvigadzirwa anofukidza matatu akateedzana: huku yekugara system, nguruwe dzimba system uye makwai edzimba system. Zvigadzirwa zvedu zveKukuru zvinosanganisira huku yekudyira yehuku, yehuku slat pasi, FRP rutsigiro danda, FRP silo, FRP chidziviriro chakakora, nguruve inodyara farrowing crate, piglet nursery crates, BMC leakage plate, pedza mweya mafeni, mombe chinwa mbiya, mhou hutch imba shehedhi, makwai zvishandiso zvekurima, gwai slat pasi uye zvichingodaro. Isu tanga tichipa OEM sevhisi kune mazhinji china zvipfuyo zvekushandisa mapoka. Zvigadzirwa zvedu dhizaini uye mhando zvakazivikanwa nevatengi pasirese.
Yedu yemombe slat pasi uye rutsigiro danda zvikamu zvinoshandiswa zvakanyanya mupurazi hombe yekugadzira purazi uye mombe nedayari dhizaini purazi.
Nekuda kwezvakanaka zvigadzirwa zvigadzirwa, mitengo inonzwisisika, mhando yakanaka, isu takawana wepasirese kutengesa network kunosvika kuUnited States, Mexico, Europe, Australia, Japan, Korea, Philippines nedzimwe nyika.